नेपाली कांग्रेसले भन्यो –ओली सरकारका सय दिन : सामान्य गति, दर्जन विसंगति » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नेपाली कांग्रेसले भन्यो –ओली सरकारका सय दिन : सामान्य गति, दर्जन विसंगति
शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०७५ १५:५२ मा प्रकाशित !
११ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको सय दिनमा सामान्य गति र एक दर्जन विसंगति देखिएको बताएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भिडियो मार्फत सरकारको १२ वटा विसंगति प्रस्तुत गरेका छन् ।
कांग्रेसले पहिल्याएको १२ विसंगतिमा प्रधानमन्त्रीले देश, जनता र भगवानको नाममा सपथ नखाएको विषय उठाएको छ । मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले भगवानको नाममा, देश र जनता कसैको नाममा पनि सपथ लिनुनपर्ने ? विसंगतिको सुरुवात यहीँबाट भयो’ शर्माले भनेका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागजस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनुलाई पनि कांग्रेसले सरकारको विसंगति भनेको छ । मुलुक संघीयतामा गएर शक्तिको विकेन्द्रिकरण भइरहेका बेला सरकारले महत्वपूर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न नहुने कांग्रेसले बताएको छ । ‘अति शक्तिले अति भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने मान्यतालाई स्मृतिमा नराख्नु विसंगतितर्फको तेस्रो कदम थियो यो सरकारको कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भनेका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: अझै ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन, नेपालमा प्रतिवर्ष तीन लाख २३ हजार गर्भपतन
NEXT POST Next post: प्रदेश २ स्तरीय दलित सभा सुरु
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०७५ १५:५२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०७५ १५:५२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०७५ १५:५२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०७५ १५:५२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०७५ १५:५२